Trump oo caro kala dul dhacay dadka soo gudbiyay dalabka xil ka qaadistiisa - BBC News Somali
Image caption Trump ayaa cadaadis kala kulmaya xisbiga dimuqraadiga
Madaxaweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa hadalkan ka sheegay xilli ay si wadajir ah shir jaraa'id u qabanayeen isaga iyo dhiggiisa dalka Finland, Sauli Niinistö, waxaana Trump uu maalmahan ba culeys siyaasadeed kala kulmayay siyaasiyiinta xisbdiga dimuqraadiga ee aqalka Kongreska ee Mareykanka.
Ilhaan Cumar oo qeyb ka ah qorshe la doonayo in xilka looga qaado Trump
Trump wuxuu sidoo kale si carro leh uga jawaabay su'aal uu weydiiyay weriye katirsan wakaaladda wararka ee Reuters.
Weriyaha ayaa Madaxweyne Donald Trump weydiiyay su'aal ahayd maxaad dooneysay in Madaxweynaha Ukraine uu ku sameeyo Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka, Joe Bidden, iyo wilkiisa. Trump ayaa halkii la rabay in uu su'aasha ka jawaabo waxaa uu weriyihii kala dul dhacay cannaan.
"Waxaan ku iri haddii aad su'aal qabto weydii Madaxweynaha Finland oo madax adeega jooji, " ayuu yiri Trump.
Image caption Adam Schiff iyo Nancy Pelosi
"Dhab ahaantii waa inay isaga wax ka weydiiyaan in uu galay khiyano qaran.", ayuu raaciyay Madaxweyne Trump.
"Dalka waa in uu ogaadaa ninkan qofka uu yahay, maxaa yeelay qofkaas waa basaas, sida ay ila tahay aniga," ayuu raaciyay.
Maxay arrintan ka yirahdeen dimuqraadiga?